IYunivesithi Newcastle - Education Overseas Higher
The University of Newcastle Iinkcukacha
isixeko : Callaghan
isifinyezo : UoN
Zifumaneke : 1965
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa The University of Newcastle
Babhalise kwi The University of Newcastle
IYunivesithi Newcastle (UoN), ngokungekho eyaziwa ngokuba University Newcastle, yiyunivesithi loluntu Australian esekwe 1965, unalo campus zalo eziphambili Callaghan, kwidolophu Newcastle, New South Wales. Iyunivesithi kananjalo iikhampasi in Ourimbah,Port arie, Singapore kunye izithili zoshishino umbindi Newcastle naseSydney.
ngokwembali, kwiYunivesithi Newcastle Medical School liphumeze inkqubo yokufunda ingxaki-based ngenxa undergraduateBachelor bayo lwenkqubo Medicine - inkqubo kamva igunyaziswa ukuze zisetyenziswe seAustralian Medical iBhunga lonke Australia. Oku ngoovulindlela ukusetyenziswa kungokunje Medicine and Health Sciences Admission Test (ABANTU) kwi 1990. Umat ​​sele wamkelwe ngokubanzi zizikolo zonyango liphela Australia ezahlukileyo njenge iikhrayitheriya zokubakhetha ezongeziweyo.
IYunivesithi Newcastle lilungu Universities Australia kunye mbutho Advance giate Schools of Business.
in 2015 Times Higher Education lalibekwa University of number Newcastle 2 eOstreliya nenombolo 30 ehlabathini seeyunivesiti phantsi 50 kweminyaka yobudala.
Nakhelwe phezu siseko equity, ukugqwesa kunye nokubandakanyeka, kwiYunivesithi Newcastle owaziwa njenge ziko-class ehlabathini ukwenza ifuthe ngaphakathi kummandla yayo, lonke Australia kunye kwihlabathi jikelele.
Uphando lwethu ehlabathini-class nabahlukeneyo. Iinkqubo zethu isidanga zibonwa ngamazwe kunye nentsebenziswano zethu intsebenziswano drive ezintsha. abagqwesileyo iinkokeli nabafundi bethu balungiselela ukwenza umahluko ehlabathini.
Siya kubekwa phezulu amathathu ekhulwini zeeyunivesithi kwihlabathi-ngokubanzi kwaye siye kuphela nje wajika 50.
Ngelo UoN sikholelwa wonke amandla nokuzimisela kufuneka ukufikelela kwimfundo enkulu ngamathuba amakhondo. Sisebenza nzima ukufezekisa isithembiso sethu lofikelelo, inxaxheba nempumelelo kwimfundo. Ngonyaka nganye, ezinye 3,000 abafundi ababhalisa izifundo zethu eyenza ezibonelela ikhondo imfundo olukhulu nokuxhasa nonwabe entsimini izifundo kwikhondo abalikhethayo.
Ukususela 1970 senze igalelo unparallelled kwimfundo lwemveli eOstreliya yaye ehlonitshwa ukunxulunyaniswa abanye babafundi ubhale ulwazi lwemveli, izifundiswa kunye nakubaphandi lizwe. Phantse isiqingatha oogqirha yemveli Australia akuba waphumelela UoN, siyazi ukuba ukwenza umahluko ebomini ezininzi kunye noluntu, ngoku nakwixesha elizayo.
School Business Newcastle
School of eyoluntu Social Science
Faculty of Engineering and Environment eyakhiwe
School of Sciences Biomedical and Pharmacy
site bushland imilo Shortland. Njengoko ekubhaliseni ekhula, i-University liqalise inkqubo yokwakha enkulu kwaye redeveloped isiza Shortland kwi kwikhampasi Callaghan, igama ngokuba Nkosi Bede Callaghan, isisekelo ilungu lebhunga University kunye nguTshansila evela 1977 ukuba 1988.
Abafundi ndandiseyunivesithi ezinokubhiyozela ngazo uSuku Ukuzimela ku 1 Julayi ngonyaka ngamnye. Ngokutsho kwemithombo inokuhlelwa, Inkululeko ezisemthethweni ibhalwe 1 EyoMqungu 1965 nge “Mtheza bemikhosi lokomfuziselo kubanjelwa kwisiza iHolo Great”. Lo mbhiyozo kuthiwa ziye ubesinyamekele nguNjingalwazi Godfrey umsuki lowo kuthiwa bathulula umnikelo iwayini kwi yomhlaba njengoko ku “ndiyingcwalise ilizwe apho iYunivesithi uphumle”. Ekubeni eyunivesithi Nngokobuchwepheshe waba elizimeleyo kwi 1 EyoMqungu 1965 imini ukuzimela kufuneka ibanjwe ngomhla 1 EyoMqungu. 1 eneneni Julayi ehambelana New South Wales University of Technology lokuzimela ukusuka igunya kwiBhodi yeeNkonzo zoLuntu ku 1 EyeKhala 1954. Ngokutsho ku Don Wright, abafundi bathatha Usuku Ukuzimela njengoko ukubhiyozela ukuzimela kwiYunivesithi Newcastle ukusuka University of New South Wales. Abafundi banelungelo ukuba ukubhiyozelwa nantoni ntsingiselo bakhetha. Isibakala sokuba bathi ke 'imini ukuzimela' esiba ingqiqo yabafundi 'ngokubaluleka ukuzimela kunye nemfuneko yabo ukuyithethelela ekuphazanyisweni ngaphandle.
in 1989, Ushintsho Dawkins zidityaniswe i Hunter Institute of leMfundo ePhakamileyo kunye neYunivesithi yase Newcastle. Newcastle Ootitshala College wamiswa ngo 1949 kwaye igama kamva Newcastle College of Advanced Education and ekugqibeleni Hunter Institute of Higher Education njengokuba iye yandiswa iminikelo yezemfundo ngaphaya nemfundo yobutitshala ukuba ngumongikazi, neminye imisebenzi zempilo encedisayo, ishishini, zezobugcisa emihle. I Hunter Institute yayimi kuthotho izakhiwo kumhlaba lukufutshane kwiYunivesithi kwi Callaghan kunye kokudityaniswa engandiswanga campus kwezinye 140 yeehektare. Phantsi zokulungisa, i-University bayiqonda kwisebe Newcastle zeNSW Conservatorium of Music ibekwe kwisithili central ezoshishino sixeko.
in 1998, le yunivesithi liseke intsebenziswano kunye Institut Wira, isikolo Malaysian ishishini labucala. in 2002, Ian mveliso, ngumhlohli, ayiphumelelanga inani elikhulu lamaphepha umfundi ovela Wira for zokungathembeki, kodwa izenzo zakhe kupheliswa ulawulo Newcastle waza waphuma esibhedlele. Emva koko wabhenela kuqala yiKomishoni elimeleyo New South Wales Against Corruption, owenza yokufunyaniswa lobuqhophololo Dr Paul Ryder, a ukusilela Vice Chancellor uRoger Holmes xa esenza umsebenzi wakhe, abuyise ekuqeqesheleni noSekela-Vice Chancellor, NguNjingalwazi Brian IsiNgesi.
in 2003, i-University of Newcastle, nezinye iiyunivesithi kunye abahlanu Australian (Macquarie, La Trobe, Flinders, Griffith no Murdoch) lusekiwe Innovative Research Universities Australia (umoya).
kweminyaka engamashumi amane emva kokufumana okuzimela, i-University of Newcastle lenze indawo elihle kakhulu ekumeni university yesizwe neyamazwe ngamazwe; zabekwa kule 10-14 uluhlu lweentlobo 38 iiyunivesiti Australia yi Shanghai Jiao Tong University kunye 215th kwi lihlabathi phantsi Sesi Times Higher Education e 2007.
Le yunivesithi avulwe ngelogo entsha 31 EyoKwindla 2007 njengenxalenye lophawu uvuselela ukulungelelanisa umfanekiso zeyunivesithi ngokusondeleyo ulwalathiso yayo ezintsha qhinga.
phezu 11 UCanzibe 2007, le yunivesithi yasungula ikhampasi kwi kwiikhampasi ezimbini eziphambili i PSB Academy e-Singapore. phezu 30 EyeKhala 2015, ETanzania UMongameli Jakaya Kikwete yaba intloko yokuqala karhulumente ukuba kunikwa i degree yekhethelo (Doctor lweMithetho) yi yunivesithi.
Uyafuna ukuxoxa The University of Newcastle ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
The University of Newcastle kwi Map
iifoto: IYunivesithi Newcastle ezisemthethweni kwiFacebook
The University of reviews Newcastle
Dibanisa ukuxoxa of The University of Newcastle.